Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) - Hello Sayarwon
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်)
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Sodium bicarbonate ကို ရင်ပူခြင်း၊အက်ဆစ်ကြောင့် အစာမကြေခြင်းတို့ကို ကုသဖို့အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး သွေးနဲ့ ဆီးထဲမှာရှိတဲ့ အက်ဆစ်ပမာဏကို လျှော့ချဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
sodium bicarbonate အမှုန့်ကို အနည်းဆုံး ရေ ၁၂၀ စီစီနဲ့ ရောရမှာဖြစ်ပြီး ချင်တွယ်ဇွန်းကို အသုံးပြုကာ ဆေးပမာဏကို တိကျစွာ ဂရုတစိုက်တိုင်းတာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Sodium bicarbonate ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ sodium bicarbonate ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ sodium bicarbonate ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Sodium bicarbonate ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Sodium bicarbonate ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်များ ရှိနေပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
အခြားသော အက်ဆစ်ချေဖျက်ဆေးများ၊အက်စ်ပရင် သို့မဟုတ် အက်စ်ပရင်ကဲ့သို့သော ဆေးများ၊benzodiazepines, flecainide (Tambocor®), သံဓါတ်အားဆေး, ketoconazole (Nizoral®), lithium (Eskalith®, Lithobid®), methenamine (Hiprex®, Urex®), methotrexate, quinidine, ဆာလ်ဖာပါဝင်သော ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ, tetracycline (Sumycin®) သို့မဟုတ် ဗီတာမင်အားဆေးများသုံးစွဲနေခြင်း။sodium bicarbonate နဲ့ တခြားဆေးတွေကို အနည်းဆုံးနှစ်နာရီလောက် ခွာပြီးသောက်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ကိုယ်ဝန်ယူရန် အစီအစဉ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေခြင်း။ တကယ်လို့ ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ခြေ၊လက်၊ခြေကျင်းဝတ်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်သော ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sodium bicarbonate ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
 အက်စ်ပရင် နှင့် အခြားသော salicylate အုပ်စုဝင် ဆေးများ (ဥပမာ salsalate);
 Barbiturate အုပ်စုဝင် ဆေးများ (ဥပမာ phenobarbital);
 ကယ်လ်ဆီယမ် ဖြည့်စွက်အားဆေးများ။
 ကော်တီကိုစတီးရွိက်ဆေးများ (ဥပအာ prednisone);
 အစာချေအက်ဆစ်ရည်များမှ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အလွှာတထပ်အုပ်ထားသော ဆေးများ။
 Lithium, quinidine;
 ဆီးဆေးများ (ဥပမာ hydrochlorothiazide).
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Sodium bicarbonate က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sodium bicarbonate ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချို့သော ပြဿနာများ။
ပြင်းထန်သော ကျောက်ကပ်ရောဂါ ခံစားနေရခြင်း (ဥပမာ ဆီးမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း)။
ပြင်းထန်သော အသည်းရောဂါ ခံစားနေရခြင်း (ဥပမာ ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း၊အသည်းခြောက်ခြင်း)။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်း ရေဓါတ်များပြားလွန်းခြင်းကြောင့် ခြေ၊လက်စသည်တို့ ဖောရောင်ခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သွေးတွင်းအက်ဆစ်ဓါတ် အတန်အသင့်များပြားခြင်းအတွက် : ၃၂၅ – ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်မှ လေးကြိမ်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။၁ ဂရမ်ဟာ ဆိုဒီယမ်နဲ့ bicarbonate ပမာဏ 11.9 mEq (mmoL) ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးတွင်း အယ်လ်ကာလီဓါတ် ပြန်လည်များပြားလာစေရန်အတွက် : ၂၅ – ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်မှ လေးကြိမ်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။၁ ဂရမ်ဟာ ဆိုဒီယမ်နဲ့ bicarbonate ပမာဏ 11.9 mEq (mmoL) ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အစာမကြေခြင်းအတွက် : ၃၂၅ – ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်မှ လေးကြိမ်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆီးတွင်း အယ်လ်ကာလီဓါတ် ပြန်လည်များပြားလာစေရန်အတွက် :
မွေးကင်းစမှ အသက် ဆယ့်နှစ်နှစ်အထိ ကလေးများ : 1 to 10 mEq (84 to 840 mg)/kg/day ပမာဏကို သောက်ဆေးအဖြစ် အကြိမ်ရေခွဲပြီး ပေးနိုင်ပါတယ်။
Sodium Bicarbonate (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
sodium bicarbonate ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
sodium bicarbonate : ဆေးတောင့်၊ဆေး အစိလေးများ၊ဆေးမှုန့်၊ဆေးရည်၊ဆေးပြား။
အချိုးအစားများ : ၆၅၀ မီလီဂရမ် ၊5%; 7.5%; 8.4%; 4.2%; 4%၊ ၃၂၅ မီလီဂရမ်၊150 mEq/1000 mL-D5%; 150 mEq/1150 mL-D5%.
Sodium bicarbonate ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Accessed Septemper 19, 2016.
Sodium bicarbonate. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-11325/sodium-
bicarbonate-oral/details. Accessed Septemper 19, 2016.
Sodium bicarbonate. https://www.drugs.com/cdi/sodium-bicarbonate.html.